ISiphepho u-Otto sihlasela iCentral America | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Isikrini sewebhu umhlaba.nullschool.net
Isikhathi seziphepho sase-Atlantic asikapheli. Yena Isiphepho u-Otto, etholakala eMelika Ephakathi, iphoqelele ukuthuthwa kwabantu abangaphezu kuka-10.000 XNUMX, futhi idale ukufa kwabathathu ePanama.
Manje isiyasondela eCosta Rica, njengoba kunomoya ovunguzayo ongu-120km / h.
1 Ukwakhiwa kweSiphepho u-Otto
Ukwakhiwa kweSiphepho u-Otto
Isithombe - NOAA, Novemba 22, 2016.
I-Otto yakhiwa ngoMsombuluko odlule, ngoNovemba 21, cishe amakhilomitha angama-530 empumalanga yeNicaragua. Kodwa-ke, yaqina ngokushesha kwathi ngoLwesibili 22 yaba yisiphepho seCandelo 1, esinemimoya enejubane elidlulele I-120km / h nangejubane lokuhamba elingu-4km / h. Ngalolo suku, kusukela eCosta Rica kuya ePanama, lesi siphepho sasibhekwe ngeso lokhozi, futhi amadolobha asePanama eColón naseNargana Island axwayiswa ngesiphepho esishisayo.
NgoNovemba 23, yantengantenga futhi yaba yisiphepho esishisayo futhi, nemimoya edlula i-100 km / h. Ngaleso sikhathi, lalitholakala e-300km ukusuka eCosta Rica kanye ne-375km ukusuka eBluefields, eNicaragua. Ngaphandle kwalokhu, iziphathimandla zanxusa abantu ukuthi bangayeki ukuqapha: U-Otto angaphinda aziqinise futhi ngaphambi kokushaya iCosta Rica.
Indlela engenzeka yeSiphepho u-Otto. Isithombe - Wunderground.com
Futhi yilokho okwenzekile. U-Otto Isiphepho sesigaba 1 futhi ngemimoya engaphezu kuka-120km / h. Ngenxa yezizathu zokuphepha, sekukhishwe izexwayiso zokuvikela futhi nezinhlelo zokuthuthwa kwabantu seziqalisiwe emadolobheni asogwini.
Lesi yisimo esiqhubeka nokuba nzima ukungabi nolwazi oluningi ngeziphepho, nokungabi nengqalasizinda eyanele ukumelana nemimoya enamandla. Ngakho-ke, Iziphathimandla zaseCosta Rican zikhiphe bonke abahlali abahlala emadolobheni asengozini, ngisho nangokuphikisana nentando yabaningi babo, ngaphambi kokuba iSiphepho u-Otto sifike ezweni.
Okwakusasa ngoLwesihlanu nangempelasonto, kulindeleke ukuba buthaka.
Sikushiya nevidiyo erekhodwe ePanama ngemuva kokudlula kuka-Otto:
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho u-Otto sihlasela iMelika Ephakathi
Ukuzamazama komhlaba okungu-7,2 kuzamazamise iNicaragua njengoba belindele ukufika kweSiphepho u-Otto